​टान : कोमाबाट फर्काउने चुनौती
Tuesday, 14 Nov, 2017 11:57 AM
पार्वती धरेल, २८ कात्तिक । ट्रेकिङ व्यावसायीहरुको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान)को ३९ औं साधारणसभाबाट पर्यटन व्यावसायी नवराज दाहाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । यसअघि उनी टानको कार्यसमिति सदस्य, महासचिव लगायत पदमा समेत कार्यरत रहिसकेकाले यस संस्थाका लागि उनी नयाँभने होइनन् ।
हुन त कुनै बेलाको निकै आकर्षक र प्रभावशाली संस्था मानिने टान यतिखेर समस्याग्रस्त छ । कतिपयले त यसलाई ‘कोमा’मा छ भनेर समेत टिप्पणी गर्दै आएका छन् । यो संस्थालाई ‘कोमा’बाट निकाल्नु उनको पहिलो चुनौती हो । त्यसैगरी टानलाई धेरैले राजनीति गर्ने थलो बनाएका छन् । राजनीतिबाट मुक्त गराई व्यावसायिक गतिविधिका माध्यमबाट नै टानको प्रतिष्ठा पुनःस्थापित गर्न सकेमा उनको अर्को सफलता मानिनेछ ।
तर समस्या के छ भने दाहाल आफै पनि राजनीति निरपेक्ष होइनन् । टानको नेतृत्वमा आउन पनि उनले बाम व्यवसायीहरुको गठबन्धनकै सहारा लिनुप¥यो । तैपनि, आफू पूर्णकालीन राजनीतिमा नभएको र विशुद्ध ट्रेकिङ व्यावसायीकै पहिचानमा यहाँसम्म आइपुगेको कारण व्यावसायिक रुपमै यस संस्थालाई अघि बढाउने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘बहुदलीय समाजमा राजनीति निरपेक्ष कोही नहुन सक्छन् । तर, आफ्नो पेसा व्यवसायको क्षेत्रमा राजनीतिक आस्थालाई अलग राखी व्यावसायिक धर्ममै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु ।’
वास्तवमा दाहाल यही संस्थाभित्र तल्लो तहबाटै हुर्किँदै माथि पुगेका हुन् । तसर्थ, यसभित्रका समस्या र सम्भावनाका सबै पक्षहरुसँग उनी सुपरिचित छन् । उनलाई थाहा छ, यस क्षेत्रमा धेरै गैरकानुनी प्रकृतिका व्यवसायहरु छन् । कतिपय पदमार्गमा पर्यटकहरु आफूखुसी जान्छन्, पथप्रदर्शक र भरिया लैजानु आवश्यक ठान्दैनन् । यसले गर्दा एकातिर नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त कम्पनीहरु दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएका छन् भने अर्कोतिर पर्यटकहरु स्वयं जोखिममा पर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन व्यवसायका बारेमा नकारात्मक खबर सम्प्रेषण हुने गरेको छ ।
कतिपय एनजीओ÷आईएनजीओले ट्रेकिङ चलाइदिँदा पनि यस व्यवसायको मर्ममा प्रहार भएको छ । व्यावसायिक मूल्य, मान्यता र रोजगारी घट्दै गएको छ । कानुनको दायरामा सबैलाई ल्याउन र गैरकानुनी ढंगले चलेका पदयात्रा व्यवसायलाई नियन्त्रित गर्न संस्थाका तर्फबाट प्रभावकारी पहल थाल्नुपर्नेछ । यसका निम्ति नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरुलाई घच्घच्याउने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले नै पर्यटन क्षेत्रमाथि निर्देशन तथा नियमन गर्नु आवश्यक छ । हामीआवश्यक खाका दिन्छौँ । व्यवसायीको नेतृत्व गरेर टानका तर्फबाट दबाब सिर्जना गर्छौँ ।’
अहिले कतिपय पदमार्गहरु मासिँदै गएका छन् । जथाभावी मोटर बाटो विस्तार गरिँदा पर्यटकीय आकर्षण र पर्यटन व्यवसायमाथि प्रहार भइरहेको छ । हाम्रा सम्पदा जोगाउन र पूर्वाधारलाई पर्यटनमैत्री बनाउन पनि टानजस्ता संस्थाहरुको भूमिका आवश्यक भएको छ । पुराना मासिँदै गए कि त नयाँको खोजी हुनुप¥यो, कि पुरानालाई ब्यूँताउन प्रयास गर्नुप¥यो । दाहाल के गर्छन् त ? उनी भन्छन्, ‘हामीले सम्भावित नयाँ ट्रेकिङ रुटहरुको खोजी गर्ने हो । नयाँ रुटहरुको खोजी गरेर प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा हामी लाग्नेछौँ ।’
भूकम्प, नाकाबन्दी, बन्द, हड्ताल लगायतका कारण पछिल्ला दशकमा पर्यटन व्यवसायमा पनि नकारात्मक असर प¥यो । उत्साहजनक रुपमा यो व्यवसाय अझै उकासिन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल भ्रमणलाई प्रभावित गर्ने विभिन्न नाममा नकारात्मक एड्भाइजरी जारी गरिरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा पदयात्रा व्यवसायीको मनोबल कसरी उकास्ने ? पदयात्राका निम्ति विदेशी पर्यटकलाई कसरी आकर्षित गर्ने ? हामी ठीकठाक छौँ भन्ने सन्देश कसरी दिने त ? यसका लागि भने दाहालले विशेष सोच बनाएका छन् । उनकै शब्दमा, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्राभल मार्ट हामी टानकै आयोजनामा गर्नेछौँ । त्यसोगर्दा आम ट्रेकिङ व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायको प्रचार गर्न नेपालमै अवसर पाउँछन् । विदेश गएर प्रचार गर्न सबैले सक्दैन । भाषिक समस्या लगायत कारणहरु छन् । सम्पर्कको अभाव र भूगोलको पहिचान नहुनाले पर्यटन व्यवसायीले प्रचार गर्न सकिरहेका छैनन् । आर्थिक समस्याहरु पनि छन् । ट्राभल मार्टले यी सबै समस्याको सम्बोधन गर्दै बेग्लै उत्साहको सञ्चार गर्नेछ ।’
व्यवसायीहरुकै समस्याको कुरा गर्दा भ्याटको अझै नसुल्झिएको अवस्था छ । भ्याट केमा लाग्ने, केमा नलाग्ने भन्ने अन्योलमा व्यवसाय चलिरहेको छ । ‘क्लाइम्बिङ परमिट’ र ट्रेकिङ परमिटको शुल्क महँगो भएको गुनासो छ । सरकारसँग जोडिएका यस्ता धेरै अन्योलका विषय छन्, जसलाई स्पष्ट पार्न र तिनलाई व्यवसायमैत्री बनाउन विशेष कार्यदल बनाएर व्यवसायीको हक हितमा लाग्ने उनको योजना छ । त्यसैगरी मजदुर र व्यवसायीबीचको द्वन्द्वले पनि व्यवसाय प्रभावित भइरहेको छ । त्यसलाई हल गर्नु पनि उनको कार्यसूचीमा छ । यी र यस्ता तमाम विषय छन्, जो दुई वर्षको कार्यकालमा उनले गरिछाड्ने प्रण गरेका छन् । उनको प्रतीज्ञा छ, ‘असम्भव भन्ने दुनियाँमा केही हुँदैन । सम्भव बनाउने कुरा हो । टान आफैमा स्थापित संस्था हो । टानसँग स्रोत छ, संयन्त्र छ र काम गर्ने इच्छाशक्ति पनि छ ।’ त्यसो हो भने अब उनलाई रोक्न सक्ने कसले ?
वास्तवमा दाहालमा केही गरौँ भन्ने भावना, इच्छाशक्ति र आत्मविश्वास अवश्य छ । उनमा यी गुणको विकास हुनुमा आफ्नै गाउँले परिवेश प्रमुख प्रेरक ठान्छन् । धादिङ, खहरे भई जाने मनास्लु पदमार्गका पर्यटकहरुसँग जिस्किएर हुर्किए उनी । तिनै गोराहरुसँग घुम्न पाए कस्तो हुँदो हो भन्ने जिज्ञासा उनमा सानैदेखि भरिएर आउँथ्यो । विस्तारै थाहा भयो, उनीहरुसँग घुम्ने—घुमाउनेहरुले त राम्रै पैसा पनि पाउँछन् । त्यसो भए त्यही व्यवसाय किन नगर्ने ? उनी कस्सिए । ट्रेकिङ व्यवसायमा हात हाले । हुँदाहुँदा यो व्यवसायको नेतृत्वदायी स्थानमा पुगे, एउटा चुनौतीपूर्ण घडीमा । दृष्टिसँगको साक्षात्कार हुँदा पनि उनी कोमामा पुगेको संस्थालाई कसरी पुनःजीवन दिने भन्ने प्रश्नमै घोत्लिइरहेका थिए । उनी भन्दै थिए, ‘विगतका कमजोरीहरुबारे एउटा कार्यदल बनाएरै अध्ययन गर्छौं । पारदर्शिता हाम्रो पहिलो सर्त हुनेछ । पारदर्शी भएर, सबैलाई समेटेर काम गर्ने हो भने समस्या पनि क्रमशः सुल्झिँदै जान्छन् ।’